"Ufo" - Ipaki (Kimry), eyabonakala eminyakeni embalwa edlule ibalazwe, kodwa kakade wathola udumo phakathi izakhamuzi zendawo izivakashi ezivela nemizana eseduze.
"Ufo" lumelela igama elithi "isiqhingi sethu oyintandokazi" hhayi njengoba "ongashiwongo Flying Object", ekuqaleni bacabanga izivakashi eziningi.
Uphi "Ufo" (Park)?
Kimry - idolobha elisesifundazweni Tver esifundeni, okuyinto etholakala eduze kwepaki emangalisayo, okungukuthi edolobhaneni Pleshkovo ukuthi amakhilomitha 15 nje uma usuka enkabeni wesifunda. Bedukile kungasebenzi, kukhona izimpawu yonke indawo. находится в 2-3 часах езды. Kusukela eMoscow, eyinkimbinkimbi itholakala 2-3 amahora drive.
Isakhiwo itholakala eGulf of Kolkunovskom iVolga, ngakho ungakwazi ngokuvamile ukuzwa igama "Ipaki Kolkunovo". Izingane kanye nabantu abadala kokuba isikhathi esikhulu, efika "Ufo" (Ipaki Kimry). Amanani ezingabizi kakhulu, lejabulisa izivakashi.
"Ufo" (Ipaki Kimry) - isikhungo eyingqayizivele ngoba ihlanganisa ezikhangayo endaweni, zoo futhi epaki amanzi.
Of ugibele kukhona carousel, ikakhulukazi okuhloswe izingane ezincane, kodwa amacebo ekuphathweni esikhathini esizayo esiseduze ukuze alungise leso simo bese usetha ukuzijabulisa, okuzoba ezithakazelisayo abadala, njengokuthi "roller coaster".
Kukhona uhlanganyela intambo emizileni, lapho ungathola shot abathandi adrenaline eziphakeme. Imizi eminingi inganekwane izinhlamvu oxhumene ezisekelweni esikuziphathimandla enobunye. Ukuze uthole emzini olandelayo, udinga bephumelela kulolo vivinyo, isithiyo.
Kukhona mini-Maze has izindlela ezimbili, ngezindlela ezimbili phandle. Othile lizoqhubeka ngendlela esifushane, umuntu ngeke wayofuna ngendlela umzila eside. Njengoba ekuphileni: wonke umuntu ngendlela yakhe.
Lidonsa kokubili ngabantwana nangabantu abadala a Slingshot giant.
Uma uvakashela "Ufo" (Ipaki Kimry) ekhokhelwe emnyango. Leli paki linezintaba zokudlala zonke khulula, ungaba Jabula kakhulu ngezinga kunesidingo. 50 рублей за каждую. Kodwa egibele pay carousel: ithikithi kubiza ruble isabelo ngasinye 50. Inkokhelo yenziwe ikhadi ekhethekile club, okuyinto ekhishwe emnyango. Uma inani icala siphela, khona-ke siye ubuyise akhawunti abo kulo lonke ezikhangayo epaki ohlangothini reverse. Yazi amakhono akho kanye nezidingo kusengaphambili, kodwa khumbula ukuthi izimali ezisele ekhadini ngeke ibuyiselwe. Noma kunjalo, ingasetshenziswa ekuhambeleni okulandelayo.
I "Ufo" (Ipaki Kimry) ongeza ihambe ngezikebhe echibini elincane. Lo mdlalo itholakala mahhala sonke isikhathi akugcini kuphela ukuthola umsebenzi lifejacket.
Iphuzu olandelayo isithakazelo - zoo (okuyinto bendawo ukushayela zootsirkom). Akukhona sikhulu kakhulu, kodwa kukhona izakhamuzi eziningi.
"Ufo" (Ipaki Kimry) bakhangwa ithuba ukuxhumana sezilwane ezifuyiwe nezasendle. Abaningi izilwane zasendle zingadla futhi isilwane.
Amahansi, amadada, Mandarin duck sizungeze epaki lelo ngokukhululeka. Ezifuywayo kukhona izimbuzi, amahhashi, amakalikuni, Guinea inyoni. Amahhashi noma ngamahhashi amancane, uma uthanda, ungakwazi ukugibela.
Phila lapha izinkawu, amakamela, amankentshane, raccoon, amabhere, izingwejeje, izikhova futhi ama-lynx, ingwe, impisi kanye ingungumbane.
Zonke izilwane ngizizwe ngikhululekile, ujabule ukuxhumana nomphakathi. Abantwana abahlala endaweni yakini, ukuza zoo ukunakekela izilwane. Kuvunyelwe ukukhetha isilwane, ukudla, isitimela ngaphansi kokuqondisa abadala.
Кимры, парк "НЛО"! Vakashela nakanjani eza Kimry, ipaki "Ufo"! Amanani amasevisi Zoo abadala - ruble 150 ngezinsuku zeviki futhi ruble 250 ngempelasonto izingane, ngokulandelana - 100 kanye ruble 150. Izingane ezingaphansi kweminyaka emithathu amahhala.
Waterpark ekhetheke, itholakala ngqo iVolga expanses. Siqukethe ezikhangayo inflatable. Ukufinyelela izindleko ruble 150 zonke izigaba ubudala. Ukuvakashela akunqunywa isikhathi. Kushisa, siyindawo ophithizelayo kakhulu kuleli paki.
Phela, lo utshani eluhlaza izivakashi abasha ahlelwe inflatable mini-amachibi, lapho izingane zingaba frolic e ukushisa kwehlobo.
Ungakwazi ukuqasha jet eqhweni, catamarans for ugibele at amanzi ephakeme, ukugwedla, iraba noma esikebheni, isikebhe, kayak. Izivakashi uphiwa uhambo ngesikebhe eduze iVolga noma ihamba esikebheni ukuba umthombo St Averky.
Imikhosi kanye master emakilasini
"Ufo" (Ipaki Kimry) - endaweni eyaziwa izenzakalo thematic aphethwe lapha njalo ngezimpelasonto. Enkundleni, elibamba amakhonsathi ahlukahlukene njengoba lendawo amaqembu amateur amaqembu professional. Abenzi be-animation abasebenza ngezizathu epaki, futhi yonke imisebenzi yezingane lapho sekubusa ubuholi babo. Ngokwesibonelo, intandokazi izingane iyona "Usuku Pirates '". Izingane zazihlukaniswa zibe amaqembu amabili, ukuqoqa izinsalela ibalazwe elikhombisa indawo umcebo yokukhosela.
Ikhanga izingane kanye nabantu abadala ukukhombisa "Isayensi Mad".
Lapha umkhosi "Epic lolwandle", imincintiswano ku Checkers, izindiza embukisweni kanye imodeli izimoto, volleyball imincintiswano.
It iyaduma esengeziwe imishado epaki "Ufo".
Ukuze uthole imali nesizotha ungakwazi oda teambuilding, okusho inhlangano ithimba yenkampani isakhiwo imidlalo.
Ngo kwepaki kukhona ukudla esitolo, yokudlela "Tavern" yokudlela "Veranda" coffee shop "iminyaka etendeni." Kushisa, kanye amathrekhi setha emathileyi nge ice cream neziphuzo ezibandayo. Kukhona ebaleni lokudlala ukuze izoso nge super-izoso "Galaxy", lapho ungakwazi Fry kebab shish ukuze imikhaya eminingana. Isikhala okwanele wonke umuntu.
Ngo kwepaki kukhona eyakhelwe Cottages, okuyinto angazamukela izivakashi. Kukhona Cottages amabili, futhi kukhona - inkampani enkulu abantu 20. Indawo amanani ziphakeme ngamaholide nangezimpelasonto. Ngokwesibonelo, ngesikhathi sikaKhisimusi izinsuku 6 indlu ukuze umbhangqwana nengane izobiza ruble 54.000, sidla ukudla kwasekuseni sedina Uhlelo izithombe izingane.
Nalapha futhi, eziyinkimbinkimbi itholakala Kolkunovo (Kimry). "Ufo" - epaki, amanani lapho ezinengqondo. Ngokwesibonelo, ithikithi olulodwa omdala izobiza ruble 550. Ticket Ungahambisa ngokukhululekile kuyo yonke insimu, kuhlanganise epaki amanzi, zootsirk, ipaki. Ungasebenzisa ezemidlalo khulula nasezindaweni zokudlala, amaslayidi, inflatable amanzi ipaki, nge ilanga loungers kanye baphathe nezambulela. Izingane ezingaphansi kweminyaka emithathu lidlule ngaphandle ithikithi.
Kusho ukuthini RIP?
Likuphi ejele ngesihluku kakhulu emhlabeni? 25 emajele ngesihluku kakhulu
Vologda uleyisi Museum: izithombe kanye nokubuyekeza